Special igwe panel - China Kingswel Machinery
Special igwe panel
Dị ka ndị ahịa na-achọ, anyị na mmepe ụfọdụ pụrụ iche igwe. Dị ka pụrụ iche extrusion usoro maka ụgbọala ihe onwunwe, dị iche iche Ọdịdị 3D ikuku duct igwe na-eso dị iche iche chọrọ, nnukwu igwe pallet na ọtụtụ pụrụ iche ekara ngwaahịa.
TB150 Special Machine N'ihi Panel
Ọ bụ a pụrụ iche igwe eji maka amị ngwaahịa na HMWHDPE dị ka akụrụngwa, gụnyere oversized plastic mgbidi ogwe, ụzọ ogwe, oké osimiri buoys, nchekwa mgbochi maka okporo ụzọ, egwuregwu equipments, na plastic ngwaahịa nke ntụrụndụ ụlọ ọrụ The igwe e mere na-arụpụtara dị na ụkpụrụ nke similair igwe ụdị nke Germany, na a igwe nlereanya nwere ndị kachasị arụmọrụ price ruru na ụwa.
TB150 bụ ìgwè na ọgwụ ụdị extrusion igbu ịkpụzi igwe nke nwere ike na-emepụta plastic ụzọ ogwe na plastic desktọọpụ ogwe. Ọ nwere ezi uche Ọdịdị na otu ebe na a pụrụ ịdabere na arụmọrụ.
1. Max.volumn nke ngwaahịa ------------- 2100x1000x120 mm
Ịghasa n'obosara ------------------------------ 120mm
Ịghasa ogologo / DIA. ruru ---------------------------- 28: 1
Rev. / min. -------------------------------- 8 ~ 78
Plasticizing ikike --------------------------- 450 kg / h
Heating mpaghara -------------------------------- 5
Heating ike ----------------------------- 43 KW
Na-akwọ ụgbọala ike ----------------------------- 132 KW
3. Die isi
Max. accumulator olu ------------------------- 50 L
Max. injection ikike ------------------------ 5 n'arọ / sec.
Max. ọnụ n'obosara ------------------------- 600 mm
Parison njikwa -------------------------- 100 ihe
Heating mpaghara ------------------------------ 6
Heating ike ---------------------------- 59,5 KW
4. clamping ngwaọrụ
ebu platen akụkụ ------------------- 1900 x 1500 mm
MKpọnwụ of ebu platen ------------------------- 650 ~ 1650 mm
max. ọsọ nke clamping nso --------------------- 350 mm / sec.
max. ọsọ nke clamping oghe --------------------- 230 mm / sec.
Clamping ike ------------------------------- 1500 KN
Gripper strok ------------------------------ 700 mm
Nnara njem strok --------------------------- 2000 mm
N'ibuli strok ------------------------------ 500 mm
升降 速度 (Lifting ọsọ) ------------------------------ 36 mm / min.
Pressure haịdrọlik mgbapụta ------------------------ 16 MPa
Single mgbapụta Ndahie ------------------------- 116 ml / r.
Dịgasị mgbapụta Ndahie ----------------------- 94 + 23 ml / r.
Hydraulic mgbapụta moto ike --------------------- 30 × 2
8. Parison servo akara usoro
Gosiri mgbali ------------------------------ 14 MPa
Gosiri eruba ------------------------------ 53 L / min.
Hydraulic mgbapụta moto ------------------------ 15 KW
9. Pneumatic usoro
Air mgbali ------------------------------- 0,7 MPa
Arụ ọrụ mgbali ----------------------------- 0,6 MPa
Air oriri ---------------------------- 1.5 M 3/ min.
10. Water ọkọnọ
Mmiri mgbali ------------------------- 0.3 MPa
11. Ọdụdọ ike
Power voltaji ---------------------------- AC380V ± 10%
Frequency --------------------------------- 50HZ
Wires ----------------------------- atọ adọ anọ wires
Total gosiri ike ------------------------- 315 KW
Nkezi oriri) ------------------------ 160 KW / h
12. arọ nke igwe -------------------------- 50 ton.
13. Machine ndepụta akụkụ (L x W x H m) ----- 11 x 4.3 x 6.7 m
14. Max. ebu uzo (LxW) ------------- 2500 × 1300 mm
Previous: Special igwe n'ihi na ngwá ọrụ ikpe
Next: Special igwe n'ihi PC gbọmgbọm
Panel Fụọnụ Nkedo Machine
Ne labeling igwe
Large oghere Fụọnụ Nkedo Ebu
Medical Product Fụọnụ Nkedo Ebu